Ugreen X-Kit, Mira uye USB-C HUB yekuenda Kwese Kwese | IPhone nhau
Ugreen X-Kit, mira uye USB-C HUB kutora chero kupi
Kuderedza huwandu hwezvishongedzo zvaunofanira kutakura neako iPad Pro kana MacBook asi uchivimbisa kuti iwe unogona kuita mhando dzese dzebasa ndizvo izvo izvi zvitsva Ugreen X-Kit anobata izvo zvatingawanawo nemutengo wakakura.
1 Tsigiro yekushanda zvakanaka
2 HUBI ine zvese zvinongedzo
Tsigiro yekushanda zvakanaka
Kune vazhinji, chinzvimbo chinoshanda cheelaptop yedu kana iPad Pro haisi iyo yakasununguka zvakanyanya, kunyanya kana tichifanira kupedza maawa akati wandei navo. Iyo keyboard iyo yakanyanya kuderera uye skrini iri zvakare pazasi pemaziso edu inoita kuti kuneta kusvike pamaoko edu nemutsipa nekukurumidza. Ndokusaka kushandiswa kwezvitsigiro kwapararira zvakanyanya. Ugreen akagadzira rutsigiro rwatinogona kushandisa netafura yedu kana laptop, akareruka uye akapetwa, saka tinogona kuitakura mune bhegi ripi zvaro.
Yakagadzirwa nealuminium, irwo rutsigiro rwakasimba asi ichingorema 282gr. Kupeta uye kubhedhenura iyi inyaya yechipiri yekutenda kune yakasarudzika naUgreen uye iyo inobvumidza iyo sitendi kuti igadzikane uye kona yekushanda inogona kugadziridzwa ine huwandu hwenzvimbo ina kubva pamadhigirii gumi nemashanu kusvika pamadhigirii makumi matatu nematatu. Izvi zvinokutendera iwe kuti upe iyo keyboard iyo zvishoma kona yeakasununguka typing, kana kumisikidza komputa pane imwezve ergonomic kukwirira. Kana chinzvimbo chaunoda changomisikidzwa, hapana mhando yekunonoka kunetsa typing.
Iyo tafura yakafukidzwa nesilicone munzvimbo dzekubatana neako laptop kana piritsi, kudzivirira kukuvadza kwayo isina kusimba aluminium pamusoro. Unogona kuishandisa neako MacBook Air uye Pro, pamwe neako iPad Pro kana Mhepo. Muchiitiko cheaya maviri ekupedzisira, zvakanaka kuvashandisa nekhibhodi yekunze, kana kuzviisa senge chero laputopu uchishandisa kavharo yekhibhodi seMicrosoft Keyboard. Rutsigiro urwu runosanganisirawo chifukidziro chatingaitakura nacho.
HUBI ine zvese zvinongedzo
Parizvino tichave tichitaura pamusoro pechinhu chinobatsira, asi zviri izvo kuti kuwedzera kune zvese zvatakakuudza, iyi tsigiro inosanganisira zvishanu zvinobatana kuti uwane zvakanakisa kubva palaptop yedu kana piritsi.
SD UHS-1 slot 104MB / s
TF UHS-1 slot 104MB / s
Kubatana kwerutsigiro kune yedu laptop kana piritsi kunoitwa uchishandisa USB-C kune USB-C tambo inosanganisirwa mubhokisi. Nayo imwechete tambo tinokwanisa kubatanidza yekunze skrini, yakaoma dhiraivha, memori makadhi, makamera, nezvimwe. Iyo yega yepashure iyo inogona kuiswa ndeyekuti chete ine USB-C, saka kana tichida kushanda nelaptop yedu yakabatana neazvino tichafanirwa kushandisa imwe USB-C yechigadzirwa. Muchiitiko cheiyo iPad iri dambudziko, nekuti isu tine imwechete USB-C, kunze kwekunge tave neMagineti Khibhodi inounza yayo yega USB-C yekuchaja.
Kubatanidza mune imwechete yekushandisa chigadziko chinokutendera iwe kusimudza laptop yako kana piritsi, uye HUB yekubatanidza kusvika kune zvishanu zvishongedzo zvakasiyana ipfungwa yakanakisa iyo Ugreen yaita nechinhu chakanakisa chigadzirwa. Chinhu chega chinokanganisa chinogona kuiswa kushaikwa kweimwe USB-C yekuchaja yakananga palaptop kana piritsi, ruzivo rwusina kukosha zvakanyanya nekuzvitonga kwakakwirira uko Apple malaptop uye mapiritsi ave nawo nhasi. Iyi Ugreen X-Kit inowanikwa izvozvi paIndiegogo (link) ne mutengo we € 64, mutengo we34% uchienzaniswa nemutengo wawo wepamutemo painenge ichitengeswa.
Asingapeteki akazotsiviwa nemapepa aipeteka uye lightweight
Zvinhu zvemhando yepamusoro
5 kubatanidza kusanganisira HDMI 4K
Inosanganisira yekubatanidza tambo uye kutakura bhegi
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » iPad Pro » Ugreen X-Kit, mira uye USB-C HUB kutora chero kupi
Caviar inorambidza AirPods Max 'Goridhe' inodhura $ 108.000
Maitiro ekuvanza mafoto pane yako iPhone, iPad kana iPod touch